» “केपी ओली फेरी, प्रधानमन्त्री हुने पक्का ! सुमन प्याकुरेलको एउटै,खुलासाले देशभरका, एमाले कार्यकर्तामा, खुशियाली” “केपी ओली फेरी, प्रधानमन्त्री हुने पक्का ! सुमन प्याकुरेलको एउटै,खुलासाले देशभरका, एमाले कार्यकर्तामा, खुशियाली” – हाम्रो खबर
हाम्रो खबर संबाद दाता9Views
“नेकपा एमालेका नेता एवं सो पार्टीका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता समेत रहेका सुमनराज प्याकुरेले माधव नेपालले एमाले विभाजन गराएर एमालेलाई केहि फरक नपर्ने बताएका छन् ।”
“माधव नेपालको ग्याङ निस्कीए पछि एमाले झन फिल्टर र बलियो भएको दावी गर्दै प्याकुरेलले झन ठूलो उभार नेकपा एमालेको पक्षमा आउँने दावी गरेका छन् । कुहिएकाहरु निस्कीए पछि पार्टी झन सफा भएको प्याकुरेलले बताए ।”
“माधव नेपालले पार्टी फुटाए भन्नु कपालको एउटा रौँ झरे बाराबर मात्रै भएको उनको दावी छ । पदका लोभीहरु केहि अहिले उतातिर लागे पनि तल्लो तहमा पार्टी विभाजनको केहि असर नभएको उनले जिकिर गरे । माधव नेपालले हाल्ने एक भोट चाँही अब एमालेमा आउँदैन होला प्याकुरेलले भनेका छन् ।”
“ओटीभी नेपाल डक कम सँगको विशेष कुराकानीमा नेता प्याकुुरेलले कुचाले बढार्नु पर्ने फोहोर हावाले उडाएर लगेको भन्दै माधव नेपालले पार्टी फटाएर जे भयो राम्रो भएको बताएका छन् । दास्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गरे पछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओली जवान हुन भएको छ माधव नेपालहरुले पार्टी छोडे पछि एमाले पनि जवान भएको छ उनले भने ।”
“अहिलेको देशको राजननिती केपी ओलीको वरिपरि घुमिरहेको भन्दै प्याकुरेलले केपी ओलीलाई माइनस गरेर राजनिती गर्छु भनेर कसैले चिताँउनै नपर्ने बताए । नेपालको राजनितीमा केपी ओलीको तुलना कोही सँग हुन नसक्ने भन्दै उनले ओलीको अगाडी अरु सबै फुच्चे भएको पनि बताए ।”
“नेता प्याकुरेलले आगामी चुनाव पछि केपी ओली सानदार मतका साथ सिंहदरवारको मुलढोका बाट फेरी प्रधानमन्त्री बनेर छिर्ने पनि ठोकुवा गरेका छन् । केपी ओली फेरी पनि कम्तीमा एक पटक यो देशको फूल फ्रेज प्रधानमन्त्री हो कसैले हल्लाउँन नसक्ने गरि उनले भनेका छन् ।”
“देउवा सरकारले पुरा कार्यकाल देश चलाउँन नसक्ने र छिट्टै नै संसद विघठन गरेर देश फेरी पनि अर्लि इलेक्सन तिर जाने पनि प्याकुरेलले दावी गरेका छन् । उनले भनेका छन् देउवाले कति दिन लान्छन् १ महिना? २ महिना? ६ महिना? कति? त्यहाँ भन्दा बढि जाँदै जाँदैन म बाजी राख्न तयार छु ।”
“नेकपा एमाले सँग चुनावमा एक्लै त कसैले प्रतिष्पर्धा नै गर्न नसक्ने पनि उनले जिकिर गरे । को को सक्छौ सबैले मिलेर आउँदा हुन्छ एमाले सँग एक्लै चुनाव लड्ने त कसैको आँट पनि हुनु पर्यो नि उनले भनेका छन् । चुनाव सम्म अहिलेको गठबन्धन भत्किने पनी उनले दावी गरे ।”
“एमाले विभाजन गर्ने माधव नेपाल सँग निकै आक्रोसित भएका प्याकुरेलले माधव नेपालले कुन क्षेत्र बाट चुनाव लड्ने हो? भनेर प्रश्न गरेका छन् । छ कुनै क्षेत्र? माधव नेपालले चुनाव लड्ने ? भन्दै प्याकुरलेले आफु माधव नेपाल सँग चुनावमा प्रतिष्पर्धा गर्न तयार रहेको र हारे राजनिती बाटै सन्यास लिने पनि घोषणा गरेका छन् ।”
“एमाले नेता सुमन प्याकुरेल सँग ओटीभी नेपालले गरेको भिडियो कुराकानी हेर्नुहोस्”